”Waa in xeer loo sameeya wakiillada hunguriga badan” – Beppe Marotta oo ku dhega hadlaya Raiola – Gool FM
(Torino) 19 Juunyo 2017 – Maareeyaha Guud ee Juventus jaalle Beppe Marotta ayaa ku baaqay in shuruuc loo sameeyo wakiillada si buu yiri looga hortago wax uu ku sheegay ”hababkooda dhuuninimada ah”.
War uu maanta qoray La Gazzetta dello Sport ayaa waxaa ku xusan in $1.1bn (€982m) oo euro khidmad ahaan loo siiyay wakiillada intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2016 heshiisyadaas oo ay isha ku haysay Transfer Matching System (TMS).
“Markii ay naadiyadu wajahayaan tartamayaal kale, gaar ahan naadiyada waawayn ee Yurub, dookh kale ma jiro aan ka ahayn inaad aqbasho dalabaadyo aan waaqici ahayn,” ayuu yiri Marotta.
“Waa in xeer loo sameeyaa doorka xirfadleeydan, oo ah dad ad u hunguri badan.” ayuu daba dhigay.
Marotta ayay dhici kartaa inuu ku dhega hadlyo Mino Raiola oo ay hadda isku dheggan yihiin AC Milan, kaasoo la sheegy inuu heshiiskii Paul Pogba oo qura ku qaatay €27m markii uu laacibku Manchester United ku biirayay xagaagii, isagoo sidoo kale Man U lacag kale ka qaatay.
Ka bogo shaxagha & safafka kooxaha Talyaaniga ee 2017-18 + Sawirro (Laacibiinta cusub oo ku jirta)
Manchester United oo DALAB ka go'aansho mujinaya ku dooneysa Ronaldo